आज कुन राशिको दिन शुभ, कुनको अशुभ ?
सम्पत्तिसंग सम्बन्धित कुनै पनि मामला पूरा गर्नको लागी एक उपयुक्त समय छ, तपाइँ निश्चित रूपबाट सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ । धेरै काम समयमै सम्पन्न हुने हुनाले मनमा शान्ति रहनेछ र तपाइँ नयाँ विश्वाससंग केहि नयाँ नीतिहरु पूरा गर्नमा संलग्नहुनुहुनेछ ।
ब्यापार- क्षत्रमा मेहनत भन्दा पनि बदी सफलता मिल्नेछ । आज ग्रह-स्थितिहरु तपाइँको लागी एक अनुकूल समय सिर्जना गरीरहेको छ तसर्थ, पूर्ण उत्साह र आत्मविश्वाससंग आफ्नो कार्यहरु पूरा गर्नुहोस् । तलब पाएका मानिसहरु पनि प्रगतिसंग सम्बन्धित राम्रो जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन ।
क्यारियर: तपाइँ सजिलैसंग उच्च शिक्षाको लागी विदेश जानेको लागी एक मौका पाउन सक्नुहुन्छ र यसको लागी तपाइँ उचित आर्थिक सहयोग पनि पाउनुहुनेछ । तपाइँको साथीको प्रगति देखी, तपाइँ पनि उहाँबाट प्रेरित हुनुहुनेछ, र तपाइँ उसको प्रति गर्व महसुस गर्नुहुनेछ । काम बिग्रिनाले मन पनि बिग्रिन सक्छ ।
जीवन साथीसंग भावनात्मक सम्बन्ध बलियो हुनेछ । आज बच्चाहरुको मनोबल सुखद राख्न प्रयास गर्नुहोला । स्वास्थ्य- स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ तर वर्तमान नकारात्मक परिस्थितिको कारण, सावधान रहनु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । भाग्यशाली रंग –पहेलो र भाग्यशाली संख्या ८ रहनेछ ।
तपाइँको दिन छिटो प्रगति तिर जानसक्छ । परिवारका सदस्यहरुसंग बिताएको समयले तपाईलाई खुशी दिनेछ, परिवारका सदस्यहरुसंग बनेको योजनाको कारण, तपाइँ ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । यदि परिवारमा कुनै पनि व्यक्तिको विवाह तय गर्नमा ढिलाइ भएको छ भने अर्को ३ देखि ४ महिना पक्कै उनीहरुको लागी लाभदायक हुनेछ ।
आजको स्थिति तपाइँको लागी हानिकारक छैन, तर भावनात्मक प्रकृतिको कारणले, तपाइँ धेरै पीडित हुनसक्नुहुन्छ । भावनात्मक भएर कुनै पनि प्रकारको निर्णय नलिनुहोस्, न त त्यस्ता चीजहरुमा संलग्न हुनुहोस् जसको कारण तपाई भावनात्मक स्वभावमा कमजोर बन्नुहुन्छ । आज द्रव्य प्राप्तिको योग पनि बनेको छ ।
साझेदारी व्यापारमा धैर्य र पारदर्शिताको धेरै आवश्यक रहनेछ किनभने सानो गलतफहमीले सम्बन्ध बिगार्नसक्छ । कार्यालयमा ग्राहकहरुसंग व्यवहार गर्दा कागजीकाम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस् । घरमा कुनै समस्याको बारेमा पति र पत्नी बीच एक विवाद हुनसक्छ । परिवारको लागि प्रेममा अनुमोदन गर्ने आज उपयुक्त समय रहनेछ ।
ध्यान राख्नुहोस् कि कसैको कुराकानीमा आएर, तपाइँ कसैलाई गलत पनि लिन सक्नुहुन्छ । आज केवल तपाइँको दक्षता र क्षमतामा विश्वास रहनुहोस साथै, आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् । तपाइँ आफ्नो भाइहरुसंग एक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नको लागी विशेष प्रयास गर्नुपर्नेहुन्छ ।
व्यस्त दिनचर्याबाट टाढा जान र जीवनमा नयाँपन ल्याउनको लागी, तपाइँ तपाइँको रोचक गतिविधिहरुमा समय बिताउनुहुनेछ । साथीहरु र आफन्तहरुलाई भेटेर रमाइलो समय बिताउनेहुनेछ । कहींबाट आउन बाँकी रहेको भुक्तानको लागी खुशी अझ बढ्नेछ ।
घर र बच्चाहरुसंग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानमा क्रोधको सट्टा संयम र समझसंग कार्य गर्नको लागी एक आवश्यकता रहन्छ र आज सुभ दिन नै रहेको छ । धेरै हदसम्म समस्याहरुको समाधान गर्नुहुनेछ । ध्यान राख्नुहोस् कि घरका बूढाहरुको पनि सम्मान गरिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ, तर महिलावर्ग विशेष गरी आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सचेत हुन आवश्यक छ । भाग्यशाली रंग - आकाश, भाग्यशाली संख्या -६ रहनेछ । एक परिचितसंग एक दुर्घटनाको कारण मानसिक तनावको सामना गर्नु पर्नेछ । स्वास्थ्य: पेट सम्बन्धी संक्रमण गलत खानपानको कारण हुनसक्छ ।
तपाइँ क्यारियरसंग सम्बन्धित प्रगति पाउनुहुनेछ, तर तपाइँको मन अनुसार नभएको कारण, तपाइँ पनि मनमा दुखी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । सम्बन्ध भन्दा बढी अन्य कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागी साथीको लागी नकारात्मकता भावना हुनेछ । स्वास्थ्य: रक्तचाप सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
विजयादशमीको दिन कस्तो रहन्छ तपाईंको भाग्य ? पढ्नुहो...
राशिअनुसार हेर्नुहोस् आजको आफ्नो भाग्य
कात्तिक महिना तपाईंका लागि कस्तो रहन्छ ?